သတင်းပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 89
၂၀၁၂ ဧပြီ ၁၊ မြန်မာပြည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မဲရလဒ်များ ညပိုင်း သိရှိသမျှစာရင်း ယူအက်စ်ကင်ပိန်းဖော်ဘားမားက ထုတ်ပြန် ဧပြီ၂၊ ၂၀၁၂ Results of the April 1 By-Elections 2012, Compiled by U.S. Campaign for Burma No. Constituency Winner Party Vote ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 1 ကော့မှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD 90%2သုံးခွ ဒေါ်စုစုလွင် NLD3ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း ဒေါက်တာမျိူးအောင် NLD 65%4မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း NLD5လှည်းကူး ဦးဖြိူးမင်းသိန်း...
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ဝဝ၂ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၂ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ကော့မှူးမြို့တွင် တွေ့ရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ -Getty Images) NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်တွင် အနိုင်ရရှိကြောင်း ရန်ကုန်မှလာသော သတင်းများက ဆိုသည်။ No tags for this post.
ကြံ့ဖွံ့နှင့် NLD အား မဲပေးရေး သဘောထား ကွဲလွဲပြီး လင်မယား ၁၄ စုံ ကွာရှင်းပြတ်စဲ Khonumthung သတင်းဌာန မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၂ ယနေ့ တွေ့ရသည့် ကြံ့ဖွံ့ ပါတီ နှင့် NLD ပါတီဝင်များ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ) စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ဒေါင်းမ နှင့် ဆင်မြေ ရွာတို့တွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးရေးနှင့် ပါတ်သက်ပြီး လင်မယားများ အကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုကြောင့် တရားဝင်ကွာရှင်းပြတ်စဲသူ လင်မယား ၁၄ စုံတွဲရှိ သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ “ရပ်ကွက်ရုံးမှာ တရားဝင်ကွာရှင်းတာ ၁၄ တွဲရှိပြီ၊ မိန်းမတွေက ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက လမ်းခင်းပေးမယ်၊ လမ်းမီး တိုင်တွေ ဆောက်ပေးမယ် ဆိုပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးကို မဲပေးဖို့လုပ်နေကြတယ်၊...
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ၂ ရက်အလို NLD သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ Yangon Press Internation မတ် ၃၀ ၊ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ၂ ရက်အလိုတွင် NLD ပါတီက မဲဆွယ်ပွဲကာလတွင် ၎င်းတို့ပါတီ ကြုံတွေ့နေရသည့် လွတ်လပ် ၊ တရားမျှတမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြေအနေများကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်တွင် ရှင်းလင်း သွားသည်။ ယင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ယခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသည် တိုင်းပြည်အတွက် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် အရေးကြီးကြောင်း ပြန်လည်ရင်သင့်မြတ်ရေး အတွက်မည်မျှ အရေးပါကြောင်းကို ပြောကြားကာ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့် အခြေအနေကို အချက် ၄ ချက်ဖြင့်ရှင်းလင်း ပြောဆိုသွားသည်။ ယင်းတို့မှာ တရားမျှတမှု မရှိပဲ တရားမ၀င်သည့် မဲဆွယ်နည်းများဖြင့် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီက လုပ်ဆောင်နေခြင်း၊...
Yangon Press International မတ်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မနန်းဝိုးဖန် မှာ သူ့ဖာသာသူ သတ်သေသွားခြင်း မဟုတ်ပဲ မတော်တဆဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု စသုံးလုံးအရာရှိများက ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အားပြောဆိုသော်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကြောင့် သတ်သေသွားသည်ဟု ယူဆကြောင်း ပြောဆိုသွားသည်။ ယင်းသို့ သေဆုံးသွားရသည့် အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မနန်းဝိုးဖန်၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မစ္စတာ နာမာဆဲ အား စသုံးလုံး မှ အရာရှိ ၂ ဦးက သတ်သေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း မတော်တဆဖြစ်မှုသာဖြစ်သည်ဟု ၎င်း၏ ဟိုတယ်သို့ လာရောက်ကာ ယနေ့ နံနက်တွင် ပြောဆိုသွားသည်ဟု ပြောသည်။ No tags for this post.
မတ်လ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၂ (Yangon Press International) (ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်ဇာတိ အသက်၁၉ နှစ်အရွယ်မနန်းဝိုးဖန် သည် ယုံကြည်အပ်နှံ မှု ပုဒ်မ ၄၀၆ နှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန တွင် အစစ်အဆေးခံယူနေစဉ် ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ ရက်နေ့ နံနက်ငါးနာရီက အဆောက်အအုံ ပဉ္စမထပ်မှ ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့သည်။ သေဆုံးသူ၏ မိသားစုဝင်များ ရန်ကုန်မြို့သို့ လာရောက် နေဆဲဖြစ်ရာ သေဆုံးရသည့် အဖြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် မသိရှိရသေးသော်လည်း ၎င်းနှင့် အတူ စစ်ဆေးခံခဲ့ရသူ သူမ၏ရှေ့နေ ဒေါ်အိအိအောင်အား YPI မှ အကျိုးအကြောင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားခြင်းကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။) YPI ။ ။ အစ်မတို့ကိုဘယ်နေ့က ခေါ်သွားတာပါလဲ။...
သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံများ – http://www.facebook.com/PopularNewsJournal မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၂မပွင့်ဖြူပြုံး နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်အတွင်း ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စည်းရုံးရေးဆင်းပြီး အပြန်တွင် လောက်လေးခွဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့် အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဦးခေါင်း၌ အတွင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ No tags for this post.
မန္တလေး နန်းတွင်းစစ်တပ်ဂိတ်က ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ခွာခိုင်း ရွှေအောင်/DVB http://burmese.dvb.no မတ် ၂၀၊ ၂၀၁၂ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ဦးဆောင် တည်ထောင်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ အနာဂတ် စစ်တပ် ခေါင်းဆောင်တို့က သူ့ဓာတ်ပုံအား လူမြင်ကွင်းမှ ဖျောက်ဖျက်ကြလိမ့်မည် ဆိုသည်ကို စစ်တပ်ဖခင် သိရှိမသွားခဲ့ပေ။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ တင်ဆောင်ထားတဲ့ ကား ၁ စီး ဟာ မန္တလေး နန်းတွင်းကို ၀င်ရောက်ရာမှာ ကားမှန်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို တပ်လုံခြုံရေးက ခွာခိုင်းလို့ ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။ No tags for this post.
မန်းငြိမ်းမောင်ကို သမ္မတအမိန့်ဖြင့် လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးဟု ဆို မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃၊ မတ် ၁၉ ၊ ၂၀၁၂ ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခန့်က ကြားသိရသော သတင်းအရ အစုိုးရတရားရုံးများက တသက်တကျွန်းထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားသည့် ကေအင်န်ယူအဖွဲ့က (ဦး)မန်းငြိမ်းမောင်ကို သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်တိုက်ရိုက်အမိန့်နှင့် လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။ အစုိုးရ၏ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ၏ ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်သည့် ဦးအောင်မင်းက အင်းစိန်ထောင်မှ မန်းငြိမ်းမောင်ကို နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။ ကေအင်န်ယူအဖွဲ့မှ အရေးပါသူတဦးဟုဆိုသည့် (ဦး) မန်းငြိမ်းမောင်ကို ကြံ့ဖွံ့အစုိုးရက ၂၀၁၁ နှစ်ကတည်းက မြန်မာပြည်တွင်းသို့ တရားမ၀င်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးထားခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အစုိုးရနှင့် ကေအင်န်ယူအဖွဲ့တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ အရှိန်ရလာစဉ်အတွင်း ပြစ်ဒဏ်ချ အရေးယူခဲ့သည်။ ၎င်းပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမည့်အကြောင်း အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအဖွဲ့က ပုဂ္ဂိုလ်တချို့က...
ဇာဏီ/Burma VJ Media Network မတ် ၁၈၊ ၂၀၁၂ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ကျန်ရှိနေသေးသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အကျဉ်းသား ဝတ်စုံနှင့် သံခြေကျင်းကို ဝတ်ဆင်ပြီး တကိုယ်တော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသည့် No tags for this post.
Page 89 of 94«1...8788899091...94»